ကလေးတွေ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းပြီး လိမ်မာနေဖို့ နည်းပေးလမ်းပြသင်ပေးမယ် – BurmeseHearts
တကယ်တော့ ကလေးဟာ ဆန္ဒတွေကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုခံနေရတာပါ။ ဆန္ဒတွေဆိုတာ သူ့တကိုယ်ရည်ဆန္ဒလည်းရှိနိုင်တယ် ၊ အမေက ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေလည်းရှိနိုင်တယ် ၊ အဖေက ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။ နှစ်ဖက် အဖိုး ၊ အဖွားတွေ ၊ ဦးလေး ၊ အဒေါ်တွေက ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒတွေ ၊ ကျောင်းကဆရာ ၊ ဆရာမတွေ ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒတွေလည်း ရှိနိုင်တယ်။
မွေးကင်းစကလေးအများစုရဲ့ဆန္ဒဟာ မိခင်နဲ့အတူနေရဖို့ ၊ မိခင်နို့ ဝဝလင်လင် သောက်စို့ခွင့်ရရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ မြင်တာ ၊ သိတာတွေ များလာတော့ လိုချင်တာတွေလည်း များလာတယ် ။ ဖြစ်ချင်တာတွေလည်းများလာတယ်။ သူ့တကိုယ်ရည် ဆန္ဒတွေများလာတာပါ။ ဒါ့အပြင် အမေက လိမ္မာစေချင်လို့ ၊ အဖေက နားလည်သိတတ်စေချင်လို့ ၊ ဆရာ ဆရာမတွေက တော်စေ တတ်စေချင်လို့ ၊ အဖိုး ၊ အဖွားတွေ ၊ ဦးလေး ၊ အဒေါ်တွေက ပြောစကားနားထောင်စေချင်လို့ စတဲ့ တကိုယ်ရည်ဆန္ဒနဲ့ အများဆန္ဒတွေကနေ ကလေးမှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
ငါ့သား ၊ ငါ့သမီး လိမ်မာတယ်။ ဒီလိုပဲ အမြဲ ပြောစကားနားထောင်နော်ဆိုတဲ့စကားက ကလေးဟာ လူကြီးတွေရဲ့ ပြောစကား (ဆန္ဒတွေ)ဆိုတာကို လိမ်မာတယ်လို့ အပြောခံရဖို့အရေး လိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးရတော့မယ်။ ပြောမစကားနားမထောင်တော့ဘူး ၊ ဆိုးလာတယ်ဆိုတဲ့ ရှုံ့ချအပြစ်တင်တဲ့စကားဟာ လူကြီးတွေရဲ့ ပြောစကား (ဆန္ဒတွေ)ကို နားမထောင်တဲ့အခါ ၊ မလိုက်နာတဲ့အခါမှာ အပြောခံရလေ့ရှိတယ်။
လိမ်မာတယ်လို့ အပြောခံရပြန်တော့လည်း အမြဲလိမ်မာသူဖြစ်ဖို့ ကိုယ်တိုင်လိုက်ပါလုပ်ကိုင် ပြောဆိုလိုသည်ဖြစ်စေ ၊ မဖြစ်စေ လူကြီးမိဘစကားကို အမြဲလိုနာခံရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကြီး ကလေးမှာရှိလာပါပြီ။ ရှုံ့ချအပြစ်တင်တဲ့စကားတွေကြောင့်လည်း ဝမ်းနည်းစိတ်နဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ကလေးမှာရှိလာပါပြီ။
ကျွန်မဟာ ကလေးကို လိုရင်းတိုရှင်း အင်္ဂလိပ်စကားတွေနဲ့ ချီးကျူးတာမျိုး ၊ သင်ပေးတာမျိုး လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကောင်းတာလေးတွေလုပ်တဲ့အခါတိုင်း ကျွန်မက ကလေးကို လက်မထောင်ပြပြီး “Good” လို့ ချီးကျူးလေ့ရှိပေမယ့် အမြဲအဲဒီလိုကောင်းအောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ သူ့ကို မဖွဲ့နှောင်ထားပါဘူး။ သူ့ကို စိတ်ဖိစီးမှုမရှိစေချင်လို့ပါ။
မလုပ်သင့်တာတွေ လုပ်နေချိန်မှာ ၊ ဆန္ဒမပြည့်လို့ အသံပြဲနဲ့ အော်ဟစ်နေချိန်မှာ ၊ ပစ္စည်းတွေပစ်ပေါက်သောင်းကျန်းနေစအချိန်တွေမှာ “Shouldn’t” လို့ လက်ညှိုးကလေး ခါယမ်းလို့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကလေးကို ဆိုးတဲ့ကလေး ၊ မလိမ္မာတဲ့ကလေးလို့ အင်္ဂလိပ်လိုရော ၊ မြန်မာလိုရော တခါမှ မသုံးနှုန်းခဲ့ဘူး။ ဒီအသုံးအနှုန်းတွေကြောင့် ကလေးစိတ်ကို ပိုဝမ်းမနည်းစေချင်သလို စိတ်ဖိစီးမှုတွေ မဖြစ်စေချင်လို့ပါ။
ဒီမှာ ကလေးသင်ယူသွားတာဟာ လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်နဲ့ မလုပ်သင့်တဲ့အလုပ်နှစ်ခုပဲရှိပါတော့တယ်။ အဲဒီနောက်က စကားလုံးစာချုပ်တွေနဲ့ ဖွဲ့နှောင်တာ ၊ ခြိမ်းခြောက်တာတွေ မခံရတဲ့အတွက် သူ့စိတ်ဟာ စိတ်ဖိစီးမှု သက်သာပါတယ်။ သူသင်ယူခဲ့တဲ့ လုပ်သင့်တာနဲ့ မလုပ်သင့်တာဆိုတဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လုပ်ရပ်နှစ်ခုဟာ ရှင်းလင်းတဲ့အတွက် တခြားခံစားမှုတွေမရောနှောဘဲ ဘယ်ဟာက လုပ်သင့်တယ် ၊ ဘယ်ဟာက မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ကွဲကွဲပြားပြား သင်ယူသွားတာပါ။
တခါတလေ မိဘကို အလိုမကျတဲ့အခါမှာ မိဘဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကို ဘုကန့်လန့်တိုက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ တမင်အရွဲ့တိုက်ပြီး လုပ်တာတွေရှိပါတယ်။ မိဘကို အလိုမကျတာတွေရှိနေတော့ မိဘလုပ်စေချင်တာဆို မလုပ်ဘဲ မိဘမလုပ်စေချင်တာကို လုပ်ပါတော့တယ်။ ဒါကိုမိဘက မလိမ်မာဘူး ၊ ဆိုးလာပြီ။ လူဆိုးကလေး ၊ လူဆိုးမလေးလို့ တံဆိပ်ကပ်လိုက်တော့ ဟိုအရင်လိမ္မာခဲ့ဖူးတာတွေကို မေ့ပစ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့။ ဒီတော့ကလေးကလည်း တံဆိပ်ကပ်ခံရမယ့်အတူတူ မထူးတော့ဘူးဆိုပြီး ပိုဆိုးလာတတ်ပါတယ်။
ဆိုးတယ်လို့ တံဆိပ်ကပ်ခံထားရတဲ့ကလေးဟာ ပို ပိုဆိုးလာလေ့ရှိတယ်။ လိမ်မာတယ်လို့ တံဆိပ်ကပ်ခံထားရတဲ့ကလေးဟာလည်း လူကြီးမိဘတွေ လုပ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒ ၊ မလုပ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ သူ့ဆန္ဒတွေ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာ လိမ်မာတယ်ဆိုတဲ့စကားမှာ မပျော်မွေ့တော့ဘဲ စိတ်ဖိစီးလာတယ်။ ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတွေ မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာ လိမ်မာတဲ့ကလေးဟာလည်း ဆိုးလာတတ်တယ်။ အဲဒီအခါ အရင်က ချုပ်တည်းထားခဲ့တဲ့ဆန္ဒတွေကို ဖွင့်ထုတ်ပြီးအတိုးချလုပ်ကိုင် ၊ ပြောဆိုလာတာတွေရှိတာမို့ ခပ်ဆိုးဆိုးကလေး ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
တကယ်ဆိုဖြစ်သင့်တာက ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကို ပြောပြသလို သူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုလည်း မေးမြန်းပါ။ ကိုယ်လုပ်စေချင်တာ သင်ပေးသလို သူလုပ်ချင်တာကိုလည်း မေးမြန်းပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်လုပ်ခွင့်ပေးပါ။ ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အပေါ်မှာ အပြစ်တင်ဆူပူပြောဆိုတာ ၊ ရိုက်နှက်အပြစ်ပေးတာ ၊ ဒဏ်ပေးတာတွေမလုပ်ခင် ဘာကြောင့် ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ ဒါကို ဘယ်လိုကုစားရမယ်ဆိုတာ ဆွေးနွေးရမှာပါ။
ကလေးတိုင်းဟာ ဖွတတ်တယ် ၊ အစားအသောက်တွေ ဖိတ်ကျံမှောက်တာမျိုး ၊ တမင်မှောက်တာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။ သူတို့တကိုယ်ရည် ညစ်ပေတာမျိုးအပြင် တခြားအရာတွေပါ ညစ်ပေတာ ၊ ပျက်စီးစေတာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။ တခါတလေ စိတ်ခံစားမှုအခြေခံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ စူးစမ်းလိုစိတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် တမင်ဖျက်စီးလိုက်တာမျိုးတွေလည်း ရှိနိုင်တယ်။ ဒီလိုလုပ်တိုင်းသာ ဆူပူရိုက်နှက်ဆုံးမကြေးဆိုရင် ကလေးစိတ်ခံစားမှုဟာ မာသထက်မာလာနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်မကလေး ဖွတတ်တဲ့အရွယ်မှာ ဖွတယ် ၊ အစားအသောက်တွေ ဖိတ်ကျံညစ်ပတ်လို့ ရှင်းလင်းဆေးကြောရပေါင်းဟာလည်း တနေ့တည်းမှာတင် အခါပေါင်းမနည်းမနောပါ။ တခါမှ သူ့ကို ဆူပူရိုက်နှက် အပြစ်တင် ၊ အပြစ်ပေးတာမျိုး မလုပ်ဖူးဘူး။ ” Again?” လို့မေးမြန်းပြီး ညစ်ပေရှုပ်ပွတာတွေရှင်းလင်းဖို့နဲ့ နောင်မှာ ဒီလိုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမယ်ဆိုတာသင်ပေးတာပဲရှိတယ်။ ဒီတော့ကလေးစိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ကြောင့်အမေအလုပ်များသွားပြီ ၊ ဒီလိုဖြစ်ရင် အမေဘာလုပ်လဲ ၊ ဒီလိုမဖြစ်အောင် ဘာလုပ်သင့်သလဲဆိုတာ သင်ယူသွားပါတယ်။ နောင်မှာ သူ့ဘာသာသူ သတိထားလာတယ်။
မတော်လို့ မှောက်တာမျိုး ၊ ပေကျံတာမျိုးဖြစ်လာရင် ကျွန်မ မသင်ပေးခဲ့ဘဲ သူ့ဘာသာသူ သုတ်စရာရှာကြံလို့ သုတ်သင်ရှင်းလင်းတာမျိုး လုပ်တာတယ်။ ကျွန်မပြောလေ့ရှိသလို “Let’s clean” ဆိုပြီး ရှင်းတော့တာပဲ။ ကလေးဆိုတော့ အရမ်းပြောင်ရှင်းသွားတာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် ဒီလိုမဖြစ်အောင် သတိထားရက် ဒီလိုဖြစ်သွားရင် ဘာလုပ်ရမယ်လို့ သူ့ဘာသာသူ သင်ယူတာကို ကျွန်မကျေးဇူးတင်စကားဆိုဖြစ်တယ်။ “Thank you. I will help you.” ဆိုတာမျိုးနဲ့ သူတပါးကို ကူညီပေးခြင်းဆိုတာလည်း ကျွန်မက နည်းပေးလမ်းပြလုပ်ခဲ့တယ်။
“ပြောင်လဲမပြောင်ဘဲနဲ့ ၊ လုပ်မနေနဲ့သွား” ဆိုတဲ့စကားဟာ ကလေးကို ကိုယ့်လုပ်ရပ် ကိုယ်တာဝန်ယူရှင်းလင်းရတယ်ဆိုတဲ့အသိသင်ပေးဖို့ အဟန့်အတားဖြစ်သွားပါတယ်။ ကလေးရဲ့ သိတတ်စိတ်ကို သိတတ်တဲ့အချိန်မှာ ချီးကျူးပေးရမှာပါ။ အားပေးကူညီရမှာပါ။ ဒါမှလည်း ကလေးဟာ ပိုပြိးနားလည်သိတတ်လာမှာပါ။ နောင် ကျွန်မ ရှင်းလင်းစရာရှိတဲ့အခါတွေမှာ သူက “Let’s clean. I will help you.”လို့ ပြောပြီးကူပါတော့တယ်။ ဒီလိုဘာကြောင့် နားလည်သိတတ်လာသလဲဆိုရင် သူခံစားရတဲ့ တဘက်သားရဲ့ သည်းခံမှုကြောင့်ပါ။
သူ့အပေါ် အမေလုပ်သူက သည်းခံပြီး သူ့အမှားတွေ ဗွေမယူခဲ့တော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း တပါးသူအပေါ် သည်းခံတတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိ သင်ယူသွားပါတယ်။ သူအပြစ်လုပ်ပေမယ့် သူ့ကို အပြစ်မတင်ဘဲ အမှန်လုပ်တတ်အောင်သင်ပေးမယ်ဆိုရင် အပြစ်လုပ်တဲ့သူကိုလည်း အမှန်လုပ်တတ်အောင် နည်းပေးလမ်းပြ သင်ပေးရမယ်ဆိုတာ သူနားလည်သွားပါတယ်။ သူအပြစ်လုပ်ပေမယ့် သူ့အပြစ်တွေ ၊ အမှားတွေကို ကူညီရှင်းလင်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူကြောင့် သူများမှားသွားခဲ့ရင်လည်း ကူညီပေးရမယ်ဆိုတာ နားလည်သွားပါတယ်။
စကားပြောတတ်စအရွယ်ကလေး ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် သူပြောတဲ့စကားလုံးတွေဟာ သူ့ကိုဘယ်သူတွေ ဘာပြောခဲ့တာကို သင်ယူလေ့လာပြီး ပြောလာတာပါ။ မပြောရဘူးလို့ တင်းကျပ်လိုက်ရင်ရင် အမူအရာနဲ့ ပြမယ်။ နောင်မှာ အပြောအဆို ၊ အပြုအမူတွေဟာ သူ့ရဲ့စရိုက်ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒီအခါမှ ဆိုးတဲ့ကလေးလို့ တံဆိပ်ကပ်ခံရပြီဆိုရင် ပိုဆိုးဖို့ပဲရှိမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေ လိမ်မာစေချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်က အပြောအဆို ၊ အမူအကျင့်တွေကနေ နည်းပေးလမ်းပြပြု ပြီး သင်ပေးရမှာပါ။
မှတ်ချက် ။ ။ စာရေးသူက နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နေထိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကလေးကိုလည်း သူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကျောင်းမှာ သူများပြောစကား ၊ ကိုယ်ပြောချင်တာ ကိုယ်တိုင်နားလည်ပြောတတ်အောင်လို့ ဒီမှာပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ဦးစားပေးသင်ကြားမှုတွေလုပ်နေတဲ့အတွက် အင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုတာမျိုးတွေရှိတာပါ။
BurmeseHearts	 Jun 2, 2015 0
ကလေးဟာ ကျောင်းနေမပျော်တာ ၊ ကျောင်းပညာရေးမှာ စိတ်မပါတော့တာတွေ…